Kufambisa Saiti Yako neCSS Sprites | Martech Zone
Ini ndinonyora nezve peji kumhanyisa zvishoma pane ino saiti uye chikamu chakakosha chewongororo uye nekuvandudza kwatinoita kunzvimbo dzevatengi vedu. Kunze kwekutamira kumaseva ane simba uye kushandisa zvishandiso senge Zvemukati Dhirivhari Networks, kune mamwe akati wandei ehurongwa hwekushandisa iwo avhareji wewebhu anovandudza anogona kushandisa
Chiyero cheiyo yekutanga Cascading Style Sheet yapfuura makore gumi nemashanu okuberekwa izvozvi. CSS yaive yakakosha shanduko mukuvandudza kwewebhu nekuti yakaparadzanisa zvemukati kubva mukugadzirwa. Tarisa uone ino blog uye chero imwe uye iyo yakawanda yemusiyano musiyano iri mune yakanamatira masitaeteti. Mafashoni emafashoni akakoshawo nekuti akachengetwa munharaunda mune cache mukati mebrowser yako. Nekuda kweizvozvo, vanhu vachienderera mberi nekushanyira saiti yako, ivo havasi kurodha pasi pepa rechitara nguva dzese… ingori zvirimo papeji.
Izvi, zvakare, zvinoderedza nzvimbo yako. A saiti inononoka inogona kukanganisa zvakanyanya kubatanidzwa uye kutendeuka iyo inogadzirwa nevateereri vako. Zano iro vashandisi vewebhu vanoshandisa iri kuisa iyo yese mifananidzo mune imwechete faira… inonzi a sprite. Panzvimbo pekuita chikumbiro kune yega yega yako faira mifananidzo, ikozvino panongoda kuve nechikumbiro chimwe chete kune imwechete sprite mufananidzo!
Unogona kuverenga nezvazvo mashandiro eCSS Sprites kuCSS-Tricks or Inopwanya Magazini yeCSS Sprite post. Pfungwa yangu haisi yekukuratidza maitiro ekuishandisa, kungokuraira iwe kuti uve nechokwadi chekuti rako rekuvandudza timu rinovapinza mune ino saiti. Muenzaniso uyo CSS Tricks inopa inoratidza gumi mifananidzo iri gumi zvikumbiro uye inowedzera kusvika 10Kb. Kana yaunganidzwa mune imwechete sprite, ndizvo 1 chikumbiro ndicho 13kb! Chikumbiro chekutenderera uye nguva dzekupindura dzemifananidzo 9 dzaenda uye huwandu hwe data hwadzikiswa neanopfuura makumi matatu muzana. Wedzera izvo nenhamba yevashanyi pane yako saiti uye uchanyatsoveura zvimwe zviwanikwa!
The apuro yekufambisa bar muenzaniso wakanaka. Bhatani rega rega rine mashoma anoti… kunyangwe iwe uri papeji, kunze kwepeji, kana kusimudzira pamusoro pebhatani. CSS inotsanangura zvinongedzo zvebhatani uye inopa dunhu renyika chaiyo kune vashandisi browser. Ese aya matunhu akadonha pamwechete mune imwechete graphic - asi inoratidzwa dunhu nedunhu sezvakatsanangurwa mune dhizaini jira.
Kana vagadziri vako vachida maturusi, pane toni kunze uko inogona kuvabatsira, kusanganisira iyo Compass CSS chimiro, RequestReduce yeASP.NET, CSS-Mushanduri zvaRuby, CSSSprite script ye Photoshop, SpritePad, SpriteRight, SpriteCow, ZeroSprites, Project Fondue's CSS Sprite jenareta, Sprite Tenzi Webhu, Uye SpriteMe Bookmarklet.
Screenshot of Sprite Tenzi Webhu:
Martech Zone haishandise mifananidzo yekumashure mune dingindira rayo, saka hatifanirwe kuendesa nzira iyi panguva ino.
Tags: cascading maitiro machiraCSScss spritecss spritespage speedspritemachira echitaera
Sep 13, 2012 pa 5: 06 AM
Mirira… hachisi chiunganidzwa chese "mufananidzo" (kana "ndege"), uye yega sub-chifananidzo (kana chidiki-cheboka remifananidzo mune ane hupenyu kana anoshanduka achichinja) "sprite"?
Pamwe zvinhu zvakatumidzwazve zita kubvira nguva yekupedzisira pandakabata chinhu chakadai asi ini ndaigona kupika iyo Sprite ndicho chinhu chakazoguma charatidzwa, kwete iyo hombe tafura yedata iyo yavakabviswa.
("Tafura yeSprite"… yanga isiri iyo?)
Sep 13, 2012 na5: 09 PM
Tingave tiri kutaura zvinhu zviviri zvakasiyana, Maka. NeCSS, unogona kudoma kuti ndeupi 'mugove' wefaira refaira kuratidza kuratidzira mashandisiro. Izvi zvinokutendera iwe kuti uise ese ako mapikicha mune imwechete 'sprite' uye wozongonongedzera kunharaunda iwe yaunoda kuratidza neCSS.